Magaalada cusub ee Falastiiniyiinta - BBC News Somali
Magaalada cusub ee Falastiiniyiinta
9 Febraayo 2015
Image caption Magaalada Rawabi ayaa dhamaad ku dhow iyadoo ay dagi doonaan 25,000 oo qof.
Maalqabeen Falastiiniyiin ah ayaa ka dhisay magaalo cusub dhulka Falastiiniyiinta ee Israel ay haysato ee Daanta Galbeed, magaalada ayaa leh Stadium iyo tiyaatar. Laakiin ilaa hadda dadka ma u soo guuri karaan magaalada sababtoo ah ma laha biyo.
Waa mashruucii ugu waynaa taariikhda Falastiiniyiinta, ayuu sheegay maalqabeenka u dhashay Falastiin ee dhalashada Maraykanka haysta ee Bashar Masri, oo ka danbeeya mashruuca magaalada cusub ee ku taalla buuraha dhulka Israel ay haysato ee Daanta Galbeed.
"Ma jiro wax la mid ah ama u dhow", ayuu sheegay Masri isagoo aad u xiisaynaya. Waxaa dagi doona magaalada labaatan iyo shan kun oo qof. Waxay yeelan doontaa Cinema, tukaamo, jardiinooyinka dadwaynaha ku nastaan, goobo lagu ciyaaro, si loo dhamaystiro nolosha ka jirta dhismayaasha magaalooyinka.
Laakiin magaaladan ayaa laga dhisayaa dhul lagu muransan yahay. Dadka dhaleecaynaya mashruuca ayaa sheegaya, inuu wax caadi ka dhigayo dhulka laga haysto Falastiiniyiinta isagoo heshiisyo la galaya Israel si uu faa'iido u sameeyo. Dadka Yuhuuda ee degan dhulka ay haastaan ee buurta u dhow magaalada ayaa wal walsan iyadoo magaalada Rawabi ay dhismayso.
"Haysashada ayaan inkirayaa" ayuu ku adkaystay Masri, oo ka yimid reer Falastiiniyiin ah oo lagu yaqaano dad lacag leh inay yihiin iyo siyaasiyiin.
Mashruucan Bilyan dollarka ah ma guulaysan doonaa?
Image caption Bashar Masri waa maalqabeenka Falastiiniytiinta ee dhisaya magaalada Rawabi.
"Waan u jeedaa wax walba maskaxdayda gudaheeda" ayuu sheegay Masri markii ugu horaysay ee ay BBC booqatay magaalada Rawabi sanadkii hore.
"Waxaan arkaa halkan maqaayado, dad guryahooda ku jira"
Wiishashka guryaha lagu dhiso ay ka lushaan calamada Falastiiniyiinta guryaha shubka ah, baabuurta shamiitada wada ayaa meesha maraya.
Image caption Naqshadda guryaha magaalada ee la iibinayo.
Bilowgii 2014kii, in kabadan 600 oo qoys ayaa gatay guryahooda. Ayman iyo Suhad Ibrahim ayaa ka mid ahaa dadkii ugu horeeyay ee soo arka guryaha la iibunayo.
Sida dad badan oo Falastiiniyiin xirfad leh, waxay hadda ku nool yihiin meel lix miles (10km) ka fog ee magaalada Ramallah oo ay ku tilmaameen meel ciriiri ah, oo aan lahayn meel banaan ah oo ay ilmaha ku ciyaaraan.
Magaalada cusub ee Rawadi ayaa balanqaadaysa geedo, jardiinooyin iyo qaylo la'aan.
Rawabi way ka wayn tahay meel guri ah.
Image caption Ban Ki Moon oo booqday magaalada iyo Maalqabeenka dhisaya Bashar Masri.
"Waa talaabadii ugu horaysay ee lagu dhisaayo wadan yar oo Falastiiniyiin ah.
"Waa aasaasida dhabta jirta in dhulka laga sameeyo" ayay sheegtay Ayman. Marka hore waxaan rabnaa nabad, waxaan rabnaa mustaqbalkeena inaan dhisno. Waan leenahay kartideeda waana dhulkeena."